हालसम्म ६ हजार २ सय ९९ जनाको स्वाव नमुना परीक्षण – Online Bichar
हालसम्म ६ हजार २ सय ९९ जनाको स्वाव नमुना परीक्षण
Online Bichar 14th April, 2020, Tuesday 6:55 PM
काठमाडौं, २ वैशाख । सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा थप फराकिलो बनाएको मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले सो कुराको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म स्वाव नमुना परीक्षण (पिसिआर) विधिबाट ६ हजार २ सय ९९ जनाको परीक्षण गरिएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र ५ सय ८४ वटा नमुना परीक्षण भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोशालामा मात्रै ४ हजार ८ सय १९ वटा जनाको परीक्षण भएको पछिल्लो २४ घण्टामा मा ३ सय ८७ जनाको नमुना परीक्षण गरिएको प्रवक्ता डा. देवकोटाले बताए । प्रयोगशाला बाहिर अहिलेसम्म १ हजार ४ सय ८० जनाको नमुना परीक्षण भएको छ ।